विवाहको लागि अनिताले नाई भन्दा सत्यको आँखामा आँशु - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
विवाहको लागि अनिताले नाई भन्दा सत्यको आँखामा आँशु
VideoForsee videoBanner Newsलभ गफ
२२ माघ २०७४, सोमबार १५:५८ 387
गायक तथा अभिनेता सत्यराज आचार्य यतिबेला सिनेमा ‘साढे सात’को प्रचार प्रसारमा खटिएका छन् । फागुन ११ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको यस सिनेमामा सत्य फोटो पत्रकारको भूमिकामा छन् । प्रस्तुत छ सिनेमाको प्रचार प्रसारकै क्रममा भेट भएका सत्य र उनकी श्रीमती अनिता थापा मगर सँग फर्सी नेटवर्कको पिरतीका लागि राधिका कँडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश आजको लभ गफ मा ।
सत्यराज– हाम्रो पहिलो भेट एउटा कार्यक्रममा भएको थियो । तर, त्यहाँ हाम्रो केही कुराकानी नै हुन पाएन । अनितालाई भने मैले देखेको थिएँ । त्यहाँ उनको स्कुलमा हामी गेष्ट भएर गएको थियौ । उनले त्यहाँ नृत्य गरेकी थिईन । उनले नृत्य सकेर गएपछि मेरो आँखाले उनलाई खोज्यो तर मैले उनलाई भेटिन । उनको नृत्य र सुन्दरता मलाई मोहित बनाएको थियो । हामी बीचमा १० वर्षको ग्याप छ । मैले उनलाई पछ्याउँदा, कल, म्यासेज गर्दा उनलाई यो बूढो किन मेरो पछि लागेको होला भन्ने लाग्थ्यो रे (हासोँ) ।
अनिता– कुराकानी हाम्रो त्यस्तो राम्रो सँग भएको नै थिएन । ब्याचलर सकेपछि मेरो उहाँ सँग जम्का भेट भएको थियो । म मेरो साथी सँग रेष्टुरेन्टबाट खाजा खाएर निस्किदै थिएँ अनि उहाँ खाजा खान जाँदै हुनुहुन्थ्यो । हामीले त उहाँलाई सेलिब्रिटीको रुपमा चिनिरहेका थियौँ । तर, उहाँले मलाई चिनेर बोलाउनुहुन्छ भनेर मैले सोंचेको थिईन । उहाँले बोलाउनु भयो ।
सत्यराज– प्रेममा परेर हामी डेट जाने घुम्ने भएन । मैले उनलाई शुरु मै म सँग विवाह गर्छौ नै भनेर प्रपोज गरेको थिएँ । उनले मैले यस बारेमा सोचेको नै छैन भनिन् । उनको जवाफ सुनेर मेरो चित्त दुखेको थियो । त्यही पनि मेरो कोशिस जारी नै थियो उनलाई आफ्नो बनाउने । पछि मैले उनलाई केही समय सोंच्ने मौका दिएर म कार्यक्रमको लागि बाहिर गएँ । कार्यक्रमबाट आएपछि मैले त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिएँ । पछि उनको बाबा आमा सँग भेटे मैले ।
त्यही बीचमा उनको फेशन शो थियो । त्यो कार्यक्रममा उनी र उनको परिवार सँग हामी याक एण्ड यति होटलमा गएका थियौँ । त्यहाँबाट अलि हामी नजिक भएका हौ ।
पहिले उनले विवाहको लागि नाई भन्दा मेरो आँशु पनि खसेको थियो । सायद यहि आँशु देखेर होला उनी विवाहको लागि राजी भईन् । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मन हो । उनलाई यो मान्छे ईमोशनल रहेछ भन्ने लागेको होला । त्यही चिजले उनलाई छोएर विवाहको लागि हुन्छ भनेकी हुन कि जस्तो लाग्छ (हाँसो)।
अनिता– पहिला नाई चाहि मैले हामी बीचमा केही हुन सक्दैन भन्ने लागेको भएर भनेको थिएँ । मैले उहाँलाई श्रीमानको हिसाबले हेरेको पनि थिईन । मान्छेको यहाँ लव नै परेको छैन । विवाह त परैको कुरा हो जस्तो लाग्थ्यो । उहाँसँग त लभ पर्ला भनेर पनि मैले सोचेको नै हैन । किनकी त्यति नै ईच्छा चाहना भएको भए मैले म्यासेज र कलको रिप्लाई गर्थे होला । मायाको कुरा अगाडि बढ्थ्यो होला तर मलाई त्यस्तो केही थिएन । त्यही भएर मैले उहाँलाई विवाहको लागि नाई भनेको हो । मैले उहाँ एकदमै सिम्पल हुुनुहुन्छ भनेर त्यो समय सम्म सायद बुझिसकेको थिए । उहाँ सफा मनको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर मैले बुझिसकेको थिएँ । त्यही कारणले पनि म उहाँ तिर आर्कषित भएको थिए ।
सत्यराज– विवाहको कुरा गर्नको लागि उनलाई मैले घर लगे । बुबा ममी सँग चिनाए । आफ्नो अफिस बाट फर्किने क्रममा उनी घरमा आएर बस्ने गर्थिन् । ममी बाबाले उनलाई राम्रो भन्न थाल्नुभएको थियो । मैले उनीलाई लिएर बा आमा सँग आफ्नो भावना पोखी सकेको थिएँ । उनको शिलस्वभाव बोली चाली सबैलाई मन परेको थियो ।
विवाहको पल फिक्स भएपछि मलाई त संसार जिते झै भएको थियो । हाम्रो अन्तरजातिय विवाह भयो तर विवाहमा बाधा अडचन भने कहिकतैबाट पनि आएन ।
अनिता– मेरो परिवारमा पनि कुराकानी उहाँले नै चलाउनु भएको हो । विवाहको कुरा फिक्स भएपछि पनि मलाई मैले के विवाह नै गर्न लागेको हो ? जस्तो लागेको थियो । यस्तो महसुस जो कोहीलाई पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ । विवाहको कुरा मैले जीवनमा नसोचेको कुरा भएको भएर पनि होला मैले विवाह नै गर्दै छु र ? जस्तो लागेको थियो ।
नरेश , मेक्सम र पूर्णकलाको ‘रुँदै रुँदै तिम्रो शहर’ सार्बजनिक
मनलाग्दी गर्ने युट्युव च्यानल बिरुद्ध कलाकार जितु नेपाल —भन्छन “अब चुपलागेर बस्दिन”
एकदम डराउनुहुन्थ्यो डाइरेक्ट म संग आएर प्रपोज गर्नै सक्नुभएन– गायिका बिन्दु परियार